[Video & SAWIRO:] Qaar kamid ah Maxaabiistii Suuj lagu qabtey oo Garoowe la gaarsiiyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / [Video & SAWIRO:] Qaar kamid ah Maxaabiistii Suuj lagu qabtey oo Garoowe la gaarsiiyey
[Video & SAWIRO:] Qaar kamid ah Maxaabiistii Suuj lagu qabtey oo Garoowe la gaarsiiyey
March 21, 2016 - By: HORSEED STAFF
Kadib markii si rasmi ah loo soo afjarey Hawlgalkii Suuj iyo Garmaal ee lagula dagaalamay Al-Shabaabkii ka soo degey halkaas, ayaa maxaabiistii lagu qabtey Suuj waxaa la gaarsiiyey xarunta Puntand ee Garowe, maxabiista ayaa ah 30 nin.
Warbaahinta Puntland oo booqatey goobihii dagaaladu ka dhaceen ayaa soo arkey ciidamda Puntland oo isu ururinaya meydadka Malayshiyaadkii al-Shabaab ee dagaaladaas lagu diley, waxaana ay ku qiyaaseen in ay arkeen 60 meyd ah kuwaas oo si wada jir ah loo aasayo.
Generaal Muxiyadiin Axmed Muuse oo warbaahinta kula hadlay Suuj ayaa sheegay in Al-shabaab laga dilay 65 nin, dhaawaca iyo maxaabiista laga hayana ka kooban yihiin 30 nin,dhanka ciidamada dowladda ayuu tilmaamay in laga dilay 3 askari, sadex kalana laga dhaawacay.
Dhanaka kale isla maanta waxaa Garacd la gaarsiiyey Maxaabiis ka badan 30 kuwaas oo isa soo dhiibey.
Halkan ka Dhagayso Codka General Muxayadiin.
Hoos ka eeg Video iyo sawirada